Dirree Waraanaa Moosul: Gareen IS ofiin jedhu lammiilee nagaa 741 ajjeese - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Waraana baatii sadaliif tureen namoonni 824,000 qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru
Gareen hidhattoota Islaamiik Isteet jedhamu wayita magaalaa Moosul to'achuuf waraana gaggeessetti, yoo xiqqaate namoonni 741 bifa "ajjechaa adabbiin" ajjeefamaniiru jedhe UN.
Gareen kun namoota hedduminaan dirqiin ukkaamsanii fuudhanii adeemuu, namoota fi manneen jireenyaa daheeffachuu fi lammiilee nagaa lubbuu ofii baraaruuf baqatan haleeluun himatamaniiru.
"Kanaaf warri itti gaafatamoo ta'an yakka suukkanneessa dalaganiif deebii kennuu qabu," jedhaa hogganaan mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii Zeyid Raad Al Huseen.
Gaaga'amni humni waraanaa Iraaq qaqqabsiises qoratamuu akka qabu waamicha dhiyeessee jira.
UN akka jedhutti lammiileen nagaa 461, haleellaa qilleensarraa humni waraanaa Iraaq fi walta'iinsi loltootaa Ameerikaan hogganamu raawwateen ajjeefamaniiru. Kunis Onkoloolessa 2016 hanga Adoolessa 2017 gidduutti ta'uu hime.
Walumaagalatti yoo xiqqaate namoonni nagaa 2521 yoo ajjeefaman, kanneen biroo 1673 ta'an ammoo waraana kana irrati madaa'uu isaanii, kanneen keessa hedduun isaanii haleellaa IS raawwateen akka ta'e, Ergamni deeggarsa Iraaq fi komiishiniin mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii gabaasa waliin baasaniin eeraniiru.
Gabaasichi, jalqaba Onkoloolessa 2016, naannoolee magaalaa Moosul to'annoo IS jala turan keessatti, jiraattonni naannolee magaalattii kan humni waraanaa Iraaq deebisee qabate keessa jiran, waan loltoota kanneen waraanuu didaniif IS'n akka haleelaman hidhattoonni IS sagalee guddistuun ifatti himaa turan jedha.
"Wayita magaalaa Moosuul deebisanii qabachuuf yaalamaa turetti, lammiileen nagaa hedduun gaaga'ama mirga namoomaa suukkanneessaaf saaxilamaniiru. Seerri namoomaa idil-addunyaas ifatti cabeera," jedhu obbo Zeyid.
"Ajjeechaan bifa adabbiin raawwatamaa ture, dararamni maatii irra gahe fi qabeenyi barbadaa'e, waraana kam keessattiyyuu kan obsamuu hin dandeenyedha. Warreen yakka sukkanneessaa kana raawwatan itti gaafatamuu qabu."
Namoonni yakka idil-addunyaa kana raawwatan mana murtii yakkaa idil-addunyaa ICC'tti akka dhiyaataniif Iraaq miseensummaa mana murtichaa akka fudhattus gabaasichi waamicha godha.
Manneen murtii Iraaq dhimma yakka idil-addunyaa ilaaluuf taayitaa akka hin qabne, poolisiin biyyattii yakka akkana qorachuuf "hir'ina gahuumsa" akka qabu, akkasumas seerri Iraaq adeemsa himannaa yakkaa sirriin akka jiraatuuf wabii hin ta'u jedha gabaasni bahe kun.
Viidiyoo Der al-Zur: Qabiyyee Islaamik Isteet dhumaa Siiriyaa keessaa
'Adamsituun qaama hormaata bineensaa nyaate' hidhame
Tiraamp qoqqobbii Tarkiirra kaahan guyyoota sagal booda kaasan
Keeniyaatti hojjettoonni omisha biyya isaanii akka uffatan ajajaman